BUDDHIST TERMS' Dictionary: HUNGRY MISERABLE BEING - ပေတ
HUNGRY MISERABLE BEING - ပေတ
HUNGRY MISERABLE BEING Peta
ပေတ - ပြိတ္တာ၊ ချမ်းသာအပေါင်းမှ ကင်းကွာသူ။
ပြိတ္တာဘ၀မှာ အတိတ်ကုသိုလ်ကံ နှိပ်စက်မှုကြောင့် အမြဲဆာလောင် မွတ်သိပ်နေကြရသည်။ စားသောက်ဖွယ် တွေ့ရပါလျက် မစားနိုင် မသောက်နိုင် ဖြစ်ရသည်။ ပြိတ္တာဘုံသည် အပါယ်လေးဘုံတွင် ပါဝင်သည်။
A peta’s existence is one constantly tormented by hunger and thirst due to his demeritorious actions in the past. A peta is unable to take food or drink even when either is available. Peta realm is included in the four miserable existences, apᾱya.